के मास्कबाट पनि बढ्छ फंगसको संक्रमण ? « रिपोर्टर्स नेपाल
के मास्कबाट पनि बढ्छ फंगसको संक्रमण ?
एजेन्सी, १३ जेठ । गत केही महिनादेखि नेपाल, भारतले कोरोनाको खतरनाक दोस्रो भेरियन्टसँग सर्घष गरिरहेको छ । यसैक्रममा कोरोनासँगै कालो र सेतो फंगस (ढुसी) केही स्थानमा फैलिसकेको छ । हालसम्म भारतमा फंगशको संक्रमणको लक्षण कोरोना संक्रमित र त्यो पनि मधुमेहको बिरामीलाई धेरै देखिएको छ । कोरोना संक्रमण कम गर्न स्टेरोइड दिइएको व्यक्तिमा धेरै फंगस देखिएको छ । भारतको राजस्थानमा कालो फंगस (ढुसी)लाई महामारीको रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
कालो ढुसी (म्युकोर–माइक्रोसिस एक दुर्लभ संक्रमण हो । जुन म्युकोर्मिसाइट्सको रुपमा हुने मोल्डको समुहको कारण हुन्छ । यसले प्रायः कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बिरामीलाई आफ्नो सिकार बनाउछ ।
खासगरी यसले डायबेटिजबाट पिडित बिरामीहरु र कोरोना संक्रमणको उपचारमा अत्यधिक प्रयोग गरिएको स्टेरायडमा यसले आक्रमण गर्छ । तर पनि विशेषज्ञहरुले फंगस कोभिड संक्रमित नभएका बिरामीहरुलाई पनि भएको बताएका छन् ।
मास्कले पनि निम्त्याउन सक्छ फंगस (ढुसी)
कोरोना भाइरसबाट बच्नलाई मास्क लगाउनु महत्वपुर्ण छ, त्यो भन्दा पनि मास्क सफा गर्नु र राख्नु महत्वपुर्ण कुरा हो । केही मानिसहरुले धेरै दिनसम्म एउटै मास्क लगाउछन् ।
२–३ हप्तादिन सम्म लगातार एउटै मास्क प्रयोग गर्दा कालो फंगस (ढुसी) हुन सक्ने एक रिपोर्टले बताएको छ । माइक्रोबायोलोजिस्टको रिपोर्ट अनुसार बोल्दा र सास लिदा मास्कमा एरोसेल जम्मा हुन्छ । ढुसी २५ देखि ३५ डिग्री सेल्सियससम्म बाच्न सक्छ । केही व्यक्तिहरु कपडाको मास्क लगाउछन् त्यसमा झन ढुसी हुने खतरा धेरै हुन्छ ।
प्रत्येक ६ घन्टामा कोभिडका बिरामीले मास्क परिर्वतन गरिरहनु पर्छ । तर, बिरामीले एउटै मास्क धेरैदिन सम्म प्रयोग गरिरहन्छन् । यसबाट फंगसको संक्रमण झन बढ्छ । मास्कलाई एन्टिसेप्टिकले धुने र घाममा सुकाउनाले पनि फंगस मर्दछ ।
केही वैज्ञानिकहरुले फोहोर मास्कको प्रयोग र हावा नछिर्ने कोठाबाट बढी कोरोना संक्रमण फैलने बताएका छन् । अस्पतालहरुले सामान्य रोगी र कोरोना बिरामी दुवैमा फंगस भेटिएको बताउदै आएको छ । सफा नगरी एउटै मास्क प्रयोग गरेकोले पनि फंगसको बिरामी भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।